Agencies sy mpanolotsaina momba ny dia: Manokana ho an'ny fahombiazana
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao momba ny fitsangatsanganana » Agencies sy mpanolotsaina momba ny dia: Manokana ho an'ny fahombiazana
Fizahan-tany azo idirana • Airlines • Airport • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Car Rental • Cruising • culinary • Kolontsaina • fanabeazana • Hotels & Resorts • Vaovao lafo vidy • Vaovao momba ny indostria fihaonana • Vaovao • Resorts • tompon'andraikitra • Tantaram-pitiavana tantaram-pitiavana tantaram-pitiavana • fiantsenana • Sports • Tourism • Fitaterana • Travel Wire News • Vaovao isan-karazany
Febroary 3, 2020
Ny mpanjifa izao dia manana safidy betsaka kokoa noho ny hatramin'izay mba hamandrihana ny fialan-tsasatr'izy ireo. Ny indostrian'ny fizahan-tany dia miova haingana ary maharitra mihitsy aza goavambe indostrialy tsy afa-mihetsika amin'ny fiovan'ny toetran'ny mpanjifa. Mba hahatafita velona, ​​ireo masoivoho mpandehandehanana marani-tsaina sy mpanolotsaina dia afaka nieritreritra tany ivelan'ny boaty mba handresy ireo masoivohon'ny fizahan-tany an-tserasera (OTA) toa ny Expedia, Priceline ary Airbnb amin'ny alàlan'ny fanomezana tolotra manokana sy traikefa premium ho an'ny mpanjifany.
Ao amin'ny indostrian'ny fifaninanana dia manome tombony amin'ny orinasa kely ny fandrosoana toerana eo amin'ny tsena ahafahany mivoatra. Ireo masoivoho fitsangatsanganana izay misafidy ny handeha hizaha dia manana tombony lehibe.
Ireo masoivohon'ny dia sy mpanolotsaina dia tsy maintsy manolotra fikitihana manokana fa tsy azon'ny OTA lehibe atao. Valin-kafatra haingana amin'ny fanontanina, fifandraisana mivantana amin'ireo mpandraharaha mpamandrika raha sendra misy olana, ary ekipa manam-pahalalana dia manangana fahatokisan-tena amin'ny mpanjifa fa miara-miasa amin'ny mpamatsy fizahan-tany za-draharaha sy mahay izy ireo.
Fivarotana zavatra niainana
Miaraka amin'ny mpanjifa afaka mamandrika ny diany manokana amin'ny Internet amin'ny potsitra vitsivitsy, afaka mandresy ny masoivohon'ny fizahan-tany amin'ny alàlan'ny fifantohana amin'ny fanomezana traikefa fa tsy serivisy fotsiny. Amin'ny alàlan'ny fifampiraharahana amin'ny mpanjifany isaky ny tranga, ny maso ivoho manampahaizana manokana dia afaka mamantatra ny toerana anampian'izy ireo lanja sy fikarakarana fanampiny izay mampiavaka azy ireo amin'ireo orinasa lehibe.
Ny orinasa tsirairay dia mila miezaka ny ho tsara indrindra amin'ny sehatra misy azy. Tsy misy hafa amin'izany ny fananganana laza ho masoivohon'ny fizahan-tany manokana. Amin'ny alàlan'ny fiasana amin'ny sehatra avo lenta, ny masoivohon'ny fizahan-tany dia afaka miantoka ny fiaraha-miasa amin'ireo mpiara-miombon'antoka premium sy ireo mpizahatany mba hanomezana fonosana fitsangatsanganana tsara indrindra ho an'ny mpanjifany.
Ny fahalalana, fahatokisana ary serivisy matihanina atolotry ny mpandraharaha fizahan-tany manokana dia manampy amin'ny fananganana fahatokisana ireo mpanjifa fa hahazo ny traikefa fety andrasan'izy ireo izy ireo. Ary, ireo mpanjifa afa-po dia mpanjifa mahatoky izay hiverina amin'ny mpanolotsaina momba ny dia tiany indrindra.
Raha tokony hiezaka ny hivarotra ny zava-drehetra amin'ny rehetra ny manam-pahaizana manokana, ny manam-pahaizana manokana amin'ny akany iray dia manamora kokoa ny maso ivoho mpitety faritany kely hanangona fahalalana lalina azon'izy ireo ampitaina amin'ny mpihaino mpanjifa voafantina.
Fomba iray tsara hanehoan'ireo masoivoho ny faritra iainan'izy ireo amin'ny alàlan'ny gTLD izay mampita mazava ny zavatra ataony.
Mampiseho fahaizana manokana ny rohe fitsangatsanganana
Ireo masoivohon'ny fizahan-tany sy ireo mpiasan'ny fizahan-tany dia manararaotra gTLD mifandraika amin'ny dia toy ny .travel, .vacations, .tours ary maro hafa. Ireo domains ireo dia ahafahan'ny mpandraharaha fitsangatsanganana an-tsehatra mampiseho mazava ny mpihaino ny momba ny maha-izy azy manokana. Ny fampiasana gTLDs mifandraika amin'ny ampahany amin'ny marketing sy ny famantarana ny marika dia manampy ireo orinasa ireo hampitombo ny fahitana sy ny fikarohana azy ireo amin'ny Internet.
Mety hitondra valisoa ny fitsangantsanganana mianakavy, saingy tsy hoe tsy misy olana. Ireo masoivoho mikarakara fianakaviana mitety faritany dia mahatakatra ny toerana itodiana, trano fandraisam-bahiny ary orinasa izay hankafizin'ny fianakaviana manontolo, sady manampy azy ireo hisoroka fandrika eny an-dalana.
Family.travel: Ny anaran'ny sehatra Family Travel no anaran'ny orinasa tena izy, izay manome azy tongotra matanjaka amin'ny marika sy amin'ny valin'ny fikarohana ho an'ireo olona mitady vahaolana momba ny dia ao amin'ny fianakaviana. Agence kely iray izay mahatakatra ny filàna sarotra ananan'ny ray aman-dreny mandeha miaraka amin'ny ankizy manomboka amin'ny zaza vao teraka ka hatramin'ny tanora sarotra sitraka ary ireo vondrona fianakaviana maro mandova mandamina diany miaraka.
Ity masoivoho ity dia misahana manokana amin'ny drafitry ny làlan-kaleha, fitsangatsanganana sy famerenana andian-taranaka maro, fitsangantsanganana an-tanety sy fitsangantsanganana, condo, fialantsasatra Disney ary fitsangatsanganana vondrona kely. Raha mikasa fialan-tsasatra amin'ny maha-fianakaviana ianao dia eo am-pelatanana ianao rehefa miresaka ny dianao miaraka amin'ny maso ivoho manam-pahaizana toa an'io.
Vivid.travel: Ity orinasa ity dia manolotra "fialantsasatra ho an'ny zava-mahadomelina" ho an'ny fianakaviana amin'ny taona rehetra. Ny fonosin'izy ireo dia miorina manodidina ny traikefa voatahiry tsara sy hotely misy ankizy ao an-tsaina. Misy ny fanamafisana ny hetsika mahafinaritra sy betsaka izay azon'ny fianakaviana manontolo atao, toy ny safaris, fitsidihan'ny tuk-tuk, fihazana scavenger, ary kilasy fandrahoan-tsakafo. Ny zava-drehetra dia karakaraina hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farany, manala ny adin-tsaina rehetra amin'ny fandrindrana sy ny fitaterana mba hahafahan'ny fianakaviana mankafy isaka ny minitra fialan-tsasatra miaraka.
Royalreunions.travel: Ny fihaonana sy ny dia dia samy teny lakile malaza ampiasain'ny mpikaroka raha te hahita safidy fitsangatsanganana ho an'ny fianakaviany. Ny fampiasana redirect izay mitana toerana ambony indrindra amin'ireto teny lakile ireto dia ahafahan'ny Royal Caribbean, iray amin'ireo sambo fitsangantsanganana lehibe indrindra eto an-tany, hijanona eo alohan'ny fifaninanana amin'ny fikarohana voajanahary.
Fitsangatsanganana ilaina manokana
Ny fizahan-tany azo tsidihina dia tsena iray mitombo, miaraka amin'ireo maso ivoho kely mahatsapa fa tena ilaina ny tolotra fitsangatsanganana matihanina ho an'ireo olona manana fahasembanana amin'ny fahitana, fahitana ary fivezivezena.
Forall.travel: Ho an'ny fitsangatsanganana rehetra dia mitovy amin'ny anarany anarany - fitsangatsanganana ho an'ny rehetra. Manokana izy ireo amin'ny fitsangatsanganana izay ahazoana antoka fa afaka mankafy ny fialantsasatra mandritra ny androm-piainany ireo mpandeha jamba sy jamba.
Toerana sy fonosana isan-karazany no natao isan-taona, miaraka amin'ny fanamafisana ny fampiononana, ny fitsaboana matihanina sy ny an'ny tena ary ny safidin'ireo mpamatsy fizahan-tany.
Travability.travel: TravAbility dia mpisolovava amin'ny fizahan-tany azo zahana, manome fotoana ho an'ireo sembana mba handeha moramora mankany amin'ireo toerana avo indrindra eto an-tany.
Ny tanjon'izy ireo dia ny:
"Amporisiho ny kolontsaina rehetra eto amin'izao tontolo izao hijerena ny fahasembanana ho ampahany lehibe amin'ny fiainana, ary hanome ny antony manosika sy fitaovana ho an'ny indostrian'ny fizahantany hahafahan'izy ireo mamorona tontolo azo idirana izay ahafahana mampiditra amin'ny fomba maharitra ara-toekarena."
Handson.travel: Hands on dia orinasa tompon'ny marenina manome fitsangantsanganana manerana an'izao tontolo izao ho an'ireo olona mampiasa tenin'ny tanana. Tsapan'ilay mpanorina fa banga ny tsenan'ny fizahantany manampahaizana rehefa hitany fa mpizahatany marenina marobe no maneho hevitra ratsy momba ny diany.
Manomboka amin'ny fiandohana manetriketrika dia manitatra ny ekipany ity masoivoho ity ary manolotra fitsidihana any amin'ny firenena 60 izao. Ny fanamafisana dia ny fanomezana serivisy premium miaraka amin'ny torolàlana amin'ny tenin'ny tanana, vondrona kely ary traikefa tsy manam-paharoa.
Nordic.cruises: Ny anarana domain dia milaza azy rehetra. Ity orinasa ity dia misahana manokana amin'ny fitsangantsanganana an-tsambo amin'ny alàlan'ny Eropa Avaratra, Scandinavia, ary ny faritra Baltika.
Miaraka amina fonosana fitsangantsanganana isan-karazany sy fitsangatsanganana an-tsambo izay mifanaraka amin'ny teti-bola rehetra, Nordic Cruises dia mirehareha amin'ny maha-mpizahatany mpizahatany azy manerana an'i Suède, Norvezy, Failandy, Estonia ary Russia.
Savorthejourney.cruises: Ity dia masoivoho mpivady kely izay tantsaha legioma mandritra ny volana fahavaratra nefa mivadika ho mpanam-pahaizana momba ny dia sy mpitsangatsangana an-tsambo rehefa manomboka mangatsiaka ny andro.
Miaraka amin'ny traikefa teo aloha teo amin'ny sehatry ny dia sy ny traikefa an-tanana nitety firenena 30, nitondra fitsangantsanganana an-dranomasina 30, ary nitety ireo fanjakana 50 rehetra tany Etazonia, ity ekipa feno fanoloran-tena ity dia mahatakatra ny pitsopitsony tsara momba ny dia izay afaka manimba na miala vakan'ny nofinofy.
Andrasana.cruises: Expectations Cruises dia mirehareha amin'ireo safidy fitsangantsanganana 32,812 amin'ny sambo 612. Amin'ny maha-mpanome tolotra manokana azy ireo, dia afaka manolotra mpanao dia lavitra sy mpankafy ranomasina fonosana fitsangantsanganana tonga lafatra araka izay ilainy izy ireo, miaraka amin'ny fifanarahana minitra farany ho an'ireo izay maniry fitsangatsanganana tampoka.
Raha mitady hanandratra ny fisian'ny maso ivoho maso manokana momba ny fitsangatsanganana ianao ary hahita ny anaranao tsara indrindra,mitady sy mividy ny anaranao mifandraika amin'ny dia amin'ny TravelDomains.